KU DHAJINTA STPTOCARPUS LEH CALEEN IYO MIRAHA: SIDA LOO AASO QAYB KA MID AH QAYBTA CAGAARAN EE DHIRTA IYO TALLAALKA DAMBE EE CARRUURTA, IYO SIDOO KALE BIXINTA DARYEELKA? - SOOSAARKA DALAGGA
Neefsashada Qaababka Neefsashada Streptocarpus Fragment of Leaf iyo Seeds
Streptokarpus waa dhir aad u furan, waxay u baahan tahay daryeel gaar ah. Dhamaan ma aha mid fudud in la xakameeyo wakiilka kaniisadda ee dabaqyada. Streptocarpus xataa way ka sii adag tahay in lagu soo saaro guriga. Laakiin maqaalkani wuxuu kaa caawin doonaa in laga hortago dhibaatooyin badan ee taranka streptokarpusa oo uu ku guuleysto natiijooyinka.
Sidee loo abuuraa?
Streptokarpus dhirbaaxo abuur, gooyn. Xilliga xilliga taranka waa bisha Febraayo - Abriil. Waqtiga qorraxdu bilaabmayso in ay kululaato, si macquul ah wax ugu kordhiso koritaanka ubaxa.
Caleenta cagaarsho waa qaabka ugu fudud ee taranka streptokarpusov. Warshadani waxay leedahay caleemo waaweyn, qaar waxay gaari karaan ilaa 25 cm dhererka. Caleenta cabbirkan ma noolaan doono haddii la gooyo gebi ahaanba. Wixii dhalmo ah caleen waa lagama maarmaan in la qaato qaybo ka mid ah saxanka warqadda. Qaybta la soo xulay ee caleen waa inay ahaato mid caafimaad leh, iyada oo aan lahayn dhar iyo midab cagaaran oo labisan.
Waxa kale oo muhiim ah in aan qalad la sameyn da'da caleen. Xaashida yar yar waxay qaadataa wakhti si ay u hesho xoog. Oo duqsigu wuxuu u beddelmi karaa ilignimadiisa.
Abuurka Streptocarpus waxaa laga iibsan karaa dukaanka ubaxa. Waxay ku jiraan bacaha warqadda. Abuurka cusub ayaa leh biqilka ugu fiican., sida caadiga ah - hadda la ururiyey. Sidaa darteed, waa arrin aad muhiim u ah marka aad iibsanaysid dareenka bixinta taariikhda.
Tilaabooyinka talaabo talaabo ah: sida guriga loogu dhufto?
Carruurta sii koraysa ee ilmaha Streptocarpus waa inay doortaan dabacsan, neefsasho, aan nafaqo lahayn iyo qoyaan si fiican u ilaalisa. Carruur ubaxa ubaxa ah ama ciid ah oo loogu talagalay Saintpaulia.
Substrate waxaa loo diyaariyaa sida soo socota.:
isku dar 2 qaybood oo ah carrada loogu talagalay cilladaha;
2 xabbadood oo perlite iyo vermiculite oo isku mid ah.
Waxaad samayn kartaa isku dhaf ah gaar ah si loo dhimo caleemaha, kaliya isku dhafka peat iyo ciid isku mid ah.
Waa muhiim! Haddii xididdada on gooyn la sameeyay si aad u tartiib tartiib ah, waxaa suurto gal ah in ciidda ku jira badan oo nitrogen. Ka hor inta beerto, beeralayda waayo-aragnimo kugula talinayaan jeermiska substrate, waayo, si fudud u kari ilaa 3-5 daqiiqadood. Waa lagama maarmaan in la quudiyo streptokarpus 2 jeer bishiiba. Bacriminta ubaxyada dhirta ayaa ku haboon tan.
Qaybaha beeray ee caleen waa in si dhexdhexaad ah loo waraabiyaa si carrada loo qoyo, laakiin ma qoyan. Waraabinta waxaa loo sameeyaa sida loogu baahan yahay hal mar toddobaadkii. Si loo qeybiyo qoyaanka qoyaanka ee dheriga waa in la waraabiyo cidhifyada taangiga.
Streptokarpus aad u xasaasi u ah qoyaanka qolka. Ka hor inta sameynta xididdada, guntooda ayan lahayn xubno biyo-dareemaya. Qoyaanka waxaa lagu nadiifiyaa xaashida oo dhan, sidaas darteed qoyaanku waa inuu ku filnaado. Caadi ahaan qoyaanka la sameeyay ee baakadka ayaa ku filan inuu xididdo.
Qolka meesha uu geedka ku baxo, heerkulku waa inuu ahaadaa ugu yaraan 20-25 digrii.
Noocyada koraya abuurka
Noocyada streptocarpus waa mid aad u yaryar, oo u eg sida qashinka oo kale. Sidaa darteed beerashada abuurka waa jimicsi aad u xanuun badan, waa in la qaato si dhab ah iyo daryeel weyn.
Ugu horreyn waxaad u baahan tahay in aad diyaariso weelasha gacmaha. Qeybta hoose ee qashin qubka. Pour peat qaso ciid ka badan dheecaan.
Si loo fududeeyo abuurka abuurka waxa lagu qasi karaa ciid wanaagsan.
Uma baahnid inaad ku aaso miraha dhulka, haddii kale way qallajin doonaan, kaliya ku dabool muraayad ama filim.
Waa muhiim! Ka hor inta beerto, substrate waa in la qoyan, miraha waa in lagu beeray on ciidda qoyan.
Waxaanu kuugu soo bandhigi doonaa si aad u daawato fiidiyowga ku saabsan abuurka abuurka streptocarpus:
Waxaa jira laba siyaabood oo ah faafinta streptocarpus oo leh cillado caleen ah:
Xaashidu waa la jaraa. Mindida, maqlaha ama shay kale oo fiiqan ayaa ku habboon tan.
Ka hor inta aan la samayn nidaamka qalabka waa in la nadiifiyaa.
Qeyb kasta oo xaashida ah waa inay ahaataa 5-7 cm.
U guuridda habkan ayaa siinaya carruurta yaryar, laakiin waxay u muuqdaan kuwo dhakhso badan (7-10 maalmood). Hal dheeraad ah Faa'iidada istaagida waa fursada yar ee caleenta caleen, tan iyo khadka la jaray waa yar yahay. Haddii shuruudaha xididada aan la ogaan, habkani waa mid la isku halleyn karo.
Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad daawato fiidiyowga ku saabsan dhalashada caleenta streptocarpus:
Warqadda waa in lagu dhejiyaa hoosta hoose.
U hubso inaad ka saartid xudunta dhexe ee saxanka warqadda.
Beerto waxay u baahan doontaa hal qayb oo xaashi ah.
Faa'iidada habkani waxaay heleysaa badanaa carruur. Ka hor intaan la beeri, xaashida waa in lagu dhaqaa biyo diirran.
Haddii xaashida laga soo iibsaday goobo laga soo iibsaday kolba marka ay guriga la geeynaayo, waa la duubay, ka dibna waxaa lagula talinayaa inay ku ridaan biyo diirran oo ku duub maryo qoyan, kadibna ku rid bac caag ah. Wixii beeraha ku yaalla weelasha gacmaha. Ka hor inta aan la beeri, qaybaha hoose ayaa si fiican loo qalajiyey ilaa 5-10 daqiiqo. Qashinka xaashida waxaa lagu qoday ciidda 6-10 cm.
Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad daawato fiidiyowga ku saabsan dhalashada caleenta streptocarpus toaster:
Boodashada caleemaha caleen waxay qaadataa ilaa laba toddobaad.. U muuqaalka muuqaalka ilmaha ee ku jira xididdada xaashida waxaa la arki karaa ka dib 1.5-2 bilood. Dhiib kasta wuxuu sameeyay mid ama laba carruur ah. Ka dib marka ay carruurtu ku koraan ugu yaraan 2 cm, waxaa lagu wareeri karaa weel gaar ah.
Sida saxda ah ee loogu talagalay ilmo dhasha, waxaad isticmaali kartaa koobabka la tuuri karo ee stogrammovye. Carruurtu waa in sidoo kale lagu hayaa aqalka dhirta lagu koriyo, si tartiib tartiib ah u caadaystaan ​​xaaladaha qolka iyagoo isticmaalaya. Kala soocida carruurta ka soo baxda xaashida waxay keeneysaa dhibaatooyin, sababtoo ah lugahooda "dhuuban" waa mid aad u nugul waana ay fududaan karaan. Dhammaan dhallaanku waxay u baahan yihiin in lagu daaweeyo xidid iyo dhir, iyaga oo aan qoto dheereynin xididka.
Nalalka. Streptokarpus waa warshad ciriiri ah, sidaas darteed waa in la koro meel fiican oo iftiin leh. Laakiin waxaa lagama maarmaan ah in la iska ilaaliyo khatarta qorraxda tooska ah ee ubaxa ma aysan dhicin.
Qolka. Kobcin streptokarpus ka fiican qolka halkaas oo aysan jirin wax qorshe ah. Ma istaagi karaan dhirta, waxay keeni karaan cudurada ubaxa iyo dhimashadooda.
Noocyada daryeelka abuurka ee guriga:
Waraabinta waxaa lagu sameeyaa iyadoo la isticmaalayo baalal. Suurtagal maaha in biyaha laga kor mariyo, haddii kale waxaad ku dhaqi kartaa dhammaan miraha.
Ka dib markii la sameeyo geedo waraaqaha ugu horeeya waa in la duubo.
Marka caleemaha dhabta ah ay bilaabaan inay koraan, waxaad samayn kartaa xulashada ugu horeysa. Si arrintan loo sameeyo, waxaad ku beerataa dhirta dherer weyn, si aysan u faragelin midba midka kale.
Noocyada daryeelka ee caleemaha caleen:
Ku rid suxuunta leh qaybaha la beeray ee xaashida boorso caag ah.
Ma aha lagama maarmaan in la sameeyo furitaan loogu talagalay hawada.
Waa lagama maarmaan in la iska ilaaliyo xiriirka u dhexeeya caleemaha iyo baakadka, waxaad dhisi kartaa qalab khaas ah.
Si aad u dhigo aqalka dhirta lagu koriyo meel diiran oo si wacan u iftiimaya.
Cudurada iyo daaweyntooda
Kala saarista streptocarpus ayaa ka dhacda aqalka dhirta lagu koriyo, taas oo lagama maarmaan u ah inay abuurto xaalado aan fiicneyn oo biqilka ah. Laakiin tani waxay kicin kartaa dhalida bakteeriyada waxyeellada leh ee burburisa warshadda horay loo jaray. Streptocarpus waxay u nugul yahiin cudurada fungal oo leh daryeel aan ku filneyn - xayrta budada ah, caaryada cawl. Waa inaad sidoo kale ka ilaalisaa dhirta caarada caarada, akhristaha iyo jaranjarada.
Thrips. Calaamadda koowaad ee geedka jiran - caleemihiisa waxay bilaabaan inay si deg deg ah u qalajaan. Jooji hawshan waa mid aad u adag. Daaweyn: isticmaalka cayayaanka. Wixii daaweyn degdeg ah waa inay kor u qaadaan qoyaanka waxayna hoos u dhigaan heerkulka qolka.
Caarada caarada. Magaca ayaa iska hadlaa, marka uu cudurku ka muuqdo caleemaha webka caarada iyo caleemaha ubaxan. Nidaamka halganka wuxuu la mid yahay kuwa la jarayo.
Dheecaan dambe ama fayras. Calaamadaha cudurka - joogitaanka dhibco mugdi ah madow. Cudurkan lama bogsiin karo, sidaa darteed waxa kaliya ee la samayn karo waa in la tuuro geedaha buka.
Macmacaanka macaanka. Cudurku wuxuu isu muujiyaa dhismaha ciidda cad ama burka geedka. Tallaabooyinka xakamaynta:
saarista qaybaha ay saameysay;
dhirta dhirta iyo walxaha mashiinka mashiinka ah.
Qamadi ciriiri. Cudurku wuxuu isu muujiyaa sida abuuritaanka dhibco brown on afkoda iyo caleemaha. Daaweyntu waxay ka kooban tahay inay ka saarto qaybaha ay saameeyeen iyo daweynta warshadda iyo ciidda leh fungicides. U hubso inaad la dagaalanto fungus u baahan tahay in dib loo eego xaaladaha streptokarpusa. Si looga hortago cudurka waxaa lagu buufin karaa hal mar asbuucii marxaladaha bakteeriyada.
Cuncuninta streptokarpusa - geedi socod dheer iyo adag. Waxaa lagama maarmaan ah in la doorto habka taranka habboon. Gooyo waa hab lagu kalsoonaan karo oo dhalmada, iyo habka abuurka ah waxaad heli kartaa midabo aan la saadaalin Karin. U fiirso dhammaan xeerarka iyo shuruudaha beerashada, waxaad ku gaari kartaa muuqaalka guriga ee dhirta ubaxkan qurux badan.